Want to study IT at graduation? Take care of these4things- Tech News Nepal Tech News Nepal
काठमाडौं । कक्षा १२ को परीक्षा दिएर बसेका लाखौं विद्यार्थी विश्वविद्यालयको ढोका उघार्न तम्तयार छन् । नेपालमै पढ्ने कि बाहिर जाने ? कुन विषय, अनि कुन कलेज पढ्ने ? यस्तै यस्तै प्रश्नले विद्यार्थी र उनीहरुका अभिभावक दुविधामा छन् ।
आज हामी स्नातक तहमा पढाइ हुने विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रममध्ये सूचना प्रविधि (आईटी) विषयको चर्चा गर्दैछौं । नेपालमा पनि पछिल्लो समय सूचना प्रविधिसम्बन्धी शैक्षिक कार्यक्रममा विद्यार्थीको आकर्षण बढेको पाइन्छ ।
कम्प्युटर र सफ्टवेयर प्रविधिको क्षेत्र फराकिलो बनिरहँदा यसमा आधारित नयाँ-नयाँ पाठ्यक्रम बनिरहेका छन् । कम्प्युटर र सूचना प्रविधि सम्बन्धी यस्ता कोर्षहरु कतिपय कम्प्युटर साइन्ससँग नजिक छन् भने कतिपय सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित छन् र कतिपय कम्प्युटर इन्जिनियरिङसँग सम्बन्धित छन् ।
अनि यस्ता काेर्षहरू पढ्न विद्यार्थीका लागि पनि धेरै विकल्प छन् । नेपालमा स्वदेशी विश्वविद्यालयदेखि विदेशका नाम चलेका विश्वविद्यालयका शैक्षिक कार्यक्रम र कलेज छन् । तर धेरैजसाे विद्यार्थी विषय र कलेज छनाैटमा दुविधा पालेर बस्ने गरेका छन् ।
यसकारण हामीले आईटी कार्यक्रम पढ्नुअघि उपयुक्त काेर्ष र कलेजकाे छनाैट कसरी गर्ने भन्नेबारे जानकारी दिँदै छाैं ।
सबैभन्दा पहिले आफूले पढ्न चाहेको कलेज कुन विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त गरी सञ्चालन भइरहेको छ, त्यो थाहा पाउनुहोस् । त्यसपछि आईटी कोर्षको पाठ्यक्रम कस्तो छ, पछिल्लो आईटी उद्योगको माग र आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने गरी पाठ्यक्रम छ कि छैन, समय समयमा पाठ्यक्रम अपडेट हुने गरेको छ कि छैन, क्रेडिट आवर कतिको छ लगायतका विषयमा गहन हिसाबले बुझ्नुपर्छ ।
यो विषयमा आफू स्पष्ट भइसक्नुभएको छ भने अब आफूले पढ्न लागेको आईटी कोर्षलाई अन्य विश्वविद्यालयले (एक्रिडिटेशन) मान्यता दिन्छ कि दिँदैन, त्याे जाँच्नुहाेस् । साथै अध्ययनका क्रममा अर्को विश्वविद्यालयमा अध्ययन गर्ने चाहना राख्दा क्रेडिट ट्रान्सफर हुन्छ कि हुन्न , त्याे पनि थाहा पाउनुहाेस् ।
३. इन्टर्नशिप, प्रोफेसनल ट्रेनिङ र जब प्लेसमेन्टकाे सुविधा थाहा पाउनुहाेस्
कलेज र आईटी कोर्ष मन परेर मात्रै भएन, शुल्क चित्त बुझेन भने कलेजमा भर्ना हुन सकिँदैन । यसकारण आफूले इच्छाएको कोर्ष पढ्न कुल कति खर्च लाग्छ, छात्रवृत्ति छ कि छैन त्यसको अध्ययन गर्नुहोस् ।